Ixesha kunye nabahlobo 20
Ezinye izilwanyana zibonisa amandla okuqonda oko kuthethwayo kubo kwaye ziya kwenza oko zikuxelelweyo ngokungathi ziyaqonda. Izilwanyana azinangqondo njengoko umntu eliqonda eli gama, engacingi nokucinga, nangona zibonakala ngathi ziyakuqonda oko kuthethwayo kuzo kwaye ziya kwenza izinto ezininzi ezo zitshelwe ukuba zizenze. Ingqondo ngumbandela obenziwa ngumntu okumbangela ukuba umenze azicinge njengo-I am-I. Izilwanyana azinayo le migaqo kwaye akukho nto ngezenzo okanye kwindlela yabo yokuziphatha inokubonisa ukuba banayo. Ukungabinangqondo, abanakukwazi ukucinga kuba ukucinga kunokwenzeka kuphela bubukho bengqondo ngomnqweno. Izilwanyana zinomnqweno njengowona mgangatho wazo uphambili nowokuqhubela phambili, kodwa awunangqondo njengemizimba yezilwanyana.
Kwindlela eyahlukileyo kunokuba emntwini, isilwanyana sinengqondo. Ingqondo apho isilwanyana kunokuthiwa inengqondo kukuba isebenza ngokusuka kwimpembelelo yengqondo yendalo iphela, ngaphandle kwemigaqo elolu hlobo. Zonke izilwanyana, ezingakhange zibe phantsi kwempembelelo yomntu, zisebenza ngokohlobo lwazo. Isilwanyana asinako ukwenza into eyahlukileyo kunoko sikuko, oko kuyilo lwesilwanyana. Umntu unakho ukwenza ngokwemvelo yesilwanyana ngokungqongqo, okanye ngokwemiqobo yesiqhelo yomntu kunye nemicimbi yentlalo okanye yeshishini, okanye unokudlula isilwanyana kunye nomntu oqhelekileyo kwaye enze ngokungcwele kunye njengoThixo. Olu khetho lwesenzo sakhe umntu anokuthi, kunokwenzeka kuba unengqondo okanye ingqondo. Ukuba isilwanyana sasinayo okanye yayinengqondo ibinokwenzeka ukuba ukhetho olunjalo luqatshelwe isenzo salo. Kodwa isilwanyana soze senze ngokungafaniyo nohlobo lwaso, kwaye into eso esichaza ubunjani besilwanyana kunye nesenzo. Konke oku kusebenza kwisilwanyana esikwimo yaso yendalo kunye nemveli okanye kwimeko kwaye xa singaphazanyiswanga okanye siza phantsi kwempembelelo yomntu. Xa umntu ezisa isilwanyana phantsi kwempembelelo yakhe, uguqula eso silwanyana sibe sikhulu kwimpembelelo yaso. Umntu uyakwazi ukusebenzisa amandla akhe okucinga ngengqondo kwisilwanyana ngendlela efanayo enza ngayo impembelelo yengqondo yakhe kwisilwanyana akuye. Umnqweno yimigaqo yesilwanyana, ingqondo yomgaqo wokuziphatha komntu. Umnqweno yimoto yengqondo. Umnqweno ngumbandela osebenza ngengqondo. Isizathu sokuba izilwanyana ziqeqesheke ukuba zithobele imiyalelo yomntu kungenxa yokuba umgaqo wokunqwenela uya kuphendula kwisenzo sengqondo kwaye uthobele oko kutshatisa xa ingqondo iqhubeka kwiinzame zayo zokulawula isilwanyana. Isilwanyana ke eso asenzi ngcinga xa sisenza ii-odolo zendoda. Isilwanyana simamela nje ngokuzenzekelayo ingcinga yengqondo esalathisa. Kumzekeliso wale nto kunokuthiwa akukho silwanyana saziwa ukuba siqonde kwaye sithobele iodolo eyahlukileyo kwenye imiyalelo ngaphambi kokuba siyinikwe. Yonke into eyenzayo iyafana ngohlobo lwento efundiswe ngumntu ukuba ayenze. Isimo sengqondo kukucwangcisa, ukuthelekisa, imvelaphi. Akukho silwanyana sinobuchule okanye amandla okucwangcisa into, ukuthelekisa ngengxoxo, okanye ukwenza ikhuba lesenzo ngokwaso okanye esinye isilwanyana. Izilwanyana zenza amaqhinga okanye zithobele ii-odolo kuba zifundisiwe kwaye zaqeqeshwa ukuzenza kwaye ziyithobele kwaye oku kungenxa yengqondo yomntu ephoselwe kumnqweno wesilwanyana esibonisa ukuba ucinga isenzo sakhe.
Oko kuxhomekeke kubuntu obungaphezulu kokwenza kwisilwanyana. Ngamnye unokuncedisa omnye, kodwa mayela noncedo oluninzi okanye umonzakalo owenziweyo kufuneka ugqitywe ngumntu. Isilwanyana sincediswa kukudibana nomntu ukuba umntu uza kufundisa kwaye alawule isilwanyana ngobubele. Isilwanyana esikwimo yaso yasendle kunye nemveli asifuni sibonelelo sabantu, kodwa xa ngokuzala nokufuya umntu ezisa isilwanyana phantsi kwempembelelo yengqondo yakhe, isilwanyana asisenakho okanye sibe nethuba lokuzingela esakhe ukutya . Ke umntu uba noxanduva lwesilwanyana; kwaye ngokuthatha olo xanduva luxanduva lomntu ukukhathalela nokukhusela isilwanyana. Umntu akakwenzi oko kuba enqwenela ukuphakama kunye nemfundo yesilwanyana kodwa unqwenela ukuba izilwanyana azisebenzise. Ngale ndlela siye safuya izilwanyana ezifana nehashe, inkomo, iigusha, ibhokhwe, inja kunye neentaka. Amaziko enza ukuba imizimba yezilwanyana ifundwe ukuze isetyenziswe kwimizimba yezilwanyana ukulungiselela ukuzilolongela umzimba womntu kwindalo ethile ezayo okanye kwindalo yehlabathi. Ngale ndlela kukho utshintshiselwano olwenziwe phakathi kwesilwanyana, kunye nomntu. Isilwanyana sifundiswa ngumntu ngeenkonzo azenzayo umntu. Umnqweno wesilwanyana wenziwa ngengqondo yomntu, kwaye ngesenzo esiqhubekayo kunye nokuphendula umgaqo-nkqubo wesilwanyana ulungiselelwe ngumgaqo-siseko wengqondo yomntu, ukwenzela ukuba kwixesha elithile elikude umgaqo isilwanyana sinokuziswa sikwimeko evumela ukuba idibane ngokukhawuleza kwaye ngqo ngengqondo. Umntu uyakuyifeza kakuhle imisebenzi yakhe ukuba wenza umsebenzi wakhe ngobulumko nangokuchwayita endaweni yenyanzeliso leemeko kunye nokukrokra. Umntu uya kunceda izilwanyana ukuba azithobe ekukhanyeni ezichaziweyo kwaye ziya kubaphatha ngobubele nangolwazelelelo kwaye azibonise uthando oluthile; baya kuthi baphendule kwiminqweno yakhe ngendlela eya kumothusa. Ukubonakalisa uthando, nangona kunjalo, kufuneka bakhathalelwe. Olo thando alifanelanga ukuba lolokwenzelwa ubudenge kunye nokwenziwa luphawu, kodwa uthando olo lufumana umphefumlo kumphefumlo wazo zonke izinto eziphilayo. Ukuba umntu ebenokwenza le nto ebeya kuphuhlisa izilwanyana kwaye beziya kuphendula kuye ngendlela eya kuthi ibangele ukuba umntu okhoyo ngokucinga ukuba izilwanyana zinobukrelekrele ngendlela yokuqiqa. Kodwa nokuba kunjalo, ukuba isilwanyana besibonakala sisebenza ngobukrelekrele ngaphezu kwesona senzayo ngoku ngekhe sibe sinamandla okucinga okanye ubuhlakani bokuqiqa.
Ubudlelwane phakathi komntu kunye nesilwanyana bubi kwaye bunobuzaza xa izilwanyana zikhutshwa kwindawo yazo ngabantu abazizidenge kwaye zenziwa ukuba zigcwalise indawo engeyiyo eyesilwanyana, eyomntu okanye eyaphezulu. Oku kwenziwa ngamadoda okanye abafazi abazama ukwenza isithixo kwisilwanyana esithile. Ngokwesiqhelo inja okanye ikati iyakhethelwa loo njongo. Isilwanyana sasekhaya senziwa into yokudumisa okanye yokunqula. Umntu osweleyo uhluthwa evela entliziyweni ephuphuma ubutyebi bamazwi anobudenge kwinto ayithandayo. Ukunqulwa kwezithixo kwezilwanyana zasekhaya kuthwelwe kwiindawo ezigqithisileyo njengokuthi izilwanyana zilungelelaniswe neefashoni zakutshanje okanye ezikhethekileyo kwaye zenziwe ukuba zinxibe imiqala yentsimbi okanye ezinye izinto zokuhombisa, kwaye zibenakho abalindi abanesibindi sokucoca iziqholo kunye nokuzondla. Ngesinye isihlandlo bahambe nenja okanye bayiqhuba kwinqwelomoya ekhethekileyo ukuze ibe nomoya omtsha ngaphandle kokudinwa. Isilwanyana sasikhuliswa ngalo lonke ixesha lokudla kwalo ubomi kwaye xa ukufa kufikwa kubekwe kwibhasikithi enabileyo; Imibhiyozo yenziwa ngaphezulu kwayo kwaye yalandelwa ngumnquli wayo kunye nabahlobo bakhe kwingcwaba elalilungiselelwe yona, apho lalibekwa kwindawo yokuphumla emnandi kunye nelitye lesikhumbuzo elibekwe phezu kwalo ukukhumbula isiganeko esilusizi. Isilwanyana masingabekwa tyala ngale nto; Lonke ityala kufuneka linamathelwe emntwini. Kodwa isilwanyana senzakaliswa sisenzo esinjalo kuba sikhutshwa kwindawo yaso yendalo kwaye sibekwa kwindawo apho ingeyiyo eyaso. Ayikulungelanga ukuphinda ingene kwindawo ethe yathathelwa kuyo kwaye ayinakho ukwenza ngokwemvelo, ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo kwisikhundla esinikwe ngumntu ongekho mthethweni. Inyathelo elinjalo kukusetyenziswa gwenxa kwithuba lesikhundla ngumntu, oya kuthi aphulukane nokulunga kwaye enze ibango lakhe lokuphathwa gadalala akwimeko efanayo kubomi bokamva. Ithuba elichithachithekileyo lesikhundla, inkcitho yemali, ukuthotywa kwabantu abanye ngokunyanzelwa ukuba babe zizicaka zesilwanyana, kwaye ngokungasifaneli isilwanyana kwindawo ebisinikwe yona, konke kuya kufuneka kuhlawulwe xa kusiziwa, ekudumazekeni kunye Ukonakaliswa kubomi bexesha elizayo. Zimbalwa isohlwayo esigqithileyo emntwini owenza umfanekiso wesilwanyana aze anqule eso silwanyana. Isenzo esinjalo kukuzama ukwenza uthixo onokubakho abe sisicaka sesilo, kwaye inzame enjalo ifanele ifumane iintlango zayo.
Ngaphantsi kwemeko ezithile iimpembelelo zezilwanyana ziyenzakalisa kakhulu ebantwini abathile. Umzekelo, xa umntu ebuthathaka okanye elele ikati okanye inja endala akufuneki ivunyelwe ukuba ichukumise umzimba, kuba xa umzimba ungabinakho kwengqondo yayo okanye ingqondo ingazi nto emzimbeni womntu, amandla emagnethi umzimba womntu uya kutsalwa yinja okanye ikati okanye nasiphi na isilwanyana esichukumisayo. Isilwanyana silapha ngokungcungcuthekisayo okanye sikuchukumise umzimba womntu ngenxa yokuba sifumana amandla athile. Ubungqina boku kukuba inja, inja endala, iya kuhlala ihlasela umzimba womntu. Oku akwenza ngenjongo ephindiweyo; ukuze akrotywe, kodwa ngakumbi kuba efumana impembelelo ethile yemagnethi emzimbeni wamntu ayilawulayo. Kunokwenzeka ukuba kuqatshelwe ukuba ikati iya kukhetha umntu oleleyo kwaye iya kuzinyanzela esifubeni sayo kunye neprr yaneliseke njengoko ifumana amandla omntu oleleyo. Ukuba oku kuyaqhubeka ngobusuku emva kobusuku loo mntu uya kuba buthathaka ade ade afe. Ngenxa yokuba izilwanyana zinokuthatha amandla kazibuthe emntwini, loo nto ayifanele ibangele umntu ukuba ahoye isilwanyana okanye angabi nabubele kuyo, kodwa endaweni yoko amenze asebenzise isigwebo sakhe ekujonganeni nezilwanyana, ababonise bonke ububele nothando umntu afanele abe nalo kubo bonke abaphilayo izidalwa; kodwa kuya kufuneka abaqeqeshe ngokwenza uqeqesho, oluya kubafundisa kwizinto eziluncedo nezilungeleyo, endaweni yokubavumela ukuba benze ngokuthanda kwabo, kuba ulivila kakhulu okanye akakhathali ukubaqeqesha okanye kuba ebonakalisa ubudenge nokugqwesa ukuzanelisa kwehambo yabo.